Dhaliilaha qorsheynta mudaharaadkii Stockholm | Somaliska
Inkastoo la dhihi karo mudaharaadkii Soomaalidu ka dhigeen irida baarlamaanka guul ayuu ku dhamaaday hadana waxaa jira eedeymo soo baxaya oo ku saabsan qorsheynta mudaharaadkaas. Mudaharaadka ayaa waxaa soo qabanqaabiyay ururo badan oo ay ka mid yihiin ururka Gabdhaha Soomaaliyeed ee Gävle, Jaaliyada Falköping, Sinnaannätverk Göteborg, Soomaalida Södermanland, anaga Somaliska.com oo ka qeyb qaadanay faafinta fariinta iyo sidoo kale ururka Somaliksa Riksförbundet i Sverige (SRFS) oo soo saaray ogolaanshaha booliska. Waxaa soo baxaya in dibad baxa ay ka soo qeyb galeen dad gaaraya 200 qof. Tiradaas waa cirbad bada la dhexdhigay marka loo barbar dhigo Soomaalida ku nool Sweden iyo qaasatan kuwa ku nool Stockholm. Ogolaanshaha dibad baxa ayaa soo baxay ka hor 1 maalin oo keliya waqtiga uu dibad baxa qabsoomay taasoo la dhihi karo waa fashil ka yimid xaga SRFS oo iyagu dalbay ogolaanshaha. SRFS ayaa ku doodaya in ay xareeyeen codsiga ogolaanshaha 26 April balse waqtigaas uu ku soo aaday fasaxii påskiga. Hadaba maxay ku dhacday in 1 isbuuc ka hor la xareeyo iyadoo la ogaa in dooda baarlamaanka ay dhacayso waqti ka badan 3 bilood? maxayse ku dhacday in Stockholm oo ah xarunta SRFS ayna ku nool yihiin Soomaalida ugu badan Sweden in aysan si hufan uga soo qeyb galin dibad baxa? Dadka ka soo qeyb galay dibad baxa ayaa basas uga yimid Göteborg, Falköping, Eskilstuna, Gävle iyo magaalooyin kale. Stockholm oo keliya ayaa laga heli karay 2000 ka badan. Dad aan la xiriiray oo Stockholm ku nool ayaan xitaa war ka hayn in Soomaalida dibad bax dhigayaan. Si kastaba ha ahaatee, Soomaalida sweden waxay doonayaan in ay helaan hogaan cusub oo si midnimo ah ugu dadaala dhibaatooyinka haysta. Waa in la helaa dad u taagan wargalinta bulshada si hufan. Waxaa la doonayaa in ururada Soomaaliyeed ay xaqiijiyaan in laga faaido magacooda. Dadaalkii iyo dibad baxyadii intaan kuma dhamaan, sidaa darteed waa in la sameeyaa wada tashi oo bulshadu helaan hogaan firfircoon oo albaabkasta u garaacaya.
Inkastoo la dhihi karo mudaharaadkii Soomaalidu ka dhigeen irida baarlamaanka guul ayuu ku dhamaaday hadana waxaa jira eedeymo soo baxaya oo ku saabsan qorsheynta mudaharaadkaas. Mudaharaadka ayaa waxaa soo qabanqaabiyay ururo badan oo ay ka mid yihiin ururka Gabdhaha Soomaaliyeed ee Gävle, Jaaliyada Falköping, Sinnaannätverk Göteborg, Soomaalida Södermanland, anaga Somaliska.com oo ka qeyb qaadanay faafinta fariinta iyo sidoo kale ururka Somaliksa Riksförbundet i Sverige (SRFS) oo soo saaray ogolaanshaha booliska.
Waxaa soo baxaya in dibad baxa ay ka soo qeyb galeen dad gaaraya 200 qof. Tiradaas waa cirbad bada la dhexdhigay marka loo barbar dhigo Soomaalida ku nool Sweden iyo qaasatan kuwa ku nool Stockholm. Ogolaanshaha dibad baxa ayaa soo baxay ka hor 1 maalin oo keliya waqtiga uu dibad baxa qabsoomay taasoo la dhihi karo waa fashil ka yimid xaga SRFS oo iyagu dalbay ogolaanshaha.
SRFS ayaa ku doodaya in ay xareeyeen codsiga ogolaanshaha 26 April balse waqtigaas uu ku soo aaday fasaxii påskiga. Hadaba maxay ku dhacday in 1 isbuuc ka hor la xareeyo iyadoo la ogaa in dooda baarlamaanka ay dhacayso waqti ka badan 3 bilood? maxayse ku dhacday in Stockholm oo ah xarunta SRFS ayna ku nool yihiin Soomaalida ugu badan Sweden in aysan si hufan uga soo qeyb galin dibad baxa?
Dadka ka soo qeyb galay dibad baxa ayaa basas uga yimid Göteborg, Falköping, Eskilstuna, Gävle iyo magaalooyin kale. Stockholm oo keliya ayaa laga heli karay 2000 ka badan. Dad aan la xiriiray oo Stockholm ku nool ayaan xitaa war ka hayn in Soomaalida dibad bax dhigayaan.
Si kastaba ha ahaatee, Soomaalida sweden waxay doonayaan in ay helaan hogaan cusub oo si midnimo ah ugu dadaala dhibaatooyinka haysta. Waa in la helaa dad u taagan wargalinta bulshada si hufan. Waxaa la doonayaa in ururada Soomaaliyeed ay xaqiijiyaan in laga faaido magacooda.
Dadaalkii iyo dibad baxyadii intaan kuma dhamaan, sidaa darteed waa in la sameeyaa wada tashi oo bulshadu helaan hogaan firfircoon oo albaabkasta u garaacaya.
Sirdoonka Sweden oo isha ku haya xubno lagu tuhmayo Al-shabaab
May 7, 2011 at 08:49
jimcale maxaa sas uledahay magaloyin badan ayaa sheegin sida linköping waxaa ahay dadkii kaqeb kalay ayaa ahay siwanag san ayuu dhacay bay bay
May 7, 2011 at 08:51
sbkey nin walba danihiisa ayuu raacanayaa somalia hadey midnimo rabto dalkeyna ayaa dhisa laheyn m grty ha ku daalin somalia waa tii dalkeeyda soo gubtay hade sweden ayey rabtaa iney gubto
**[AFLAGAADO WAA KA MAMNUUC]**. dadka noo daa. Adigoo miiran ayaa ina kala dilay. Soco danahaaga aad sheegeyso raaco. Inaan kaa maarano sow kuma tusin Arbacadii 4/5-2011? Hada kabidna laguuma baahna idinka iyo SRFS-ka la sheegaay oo dadka magacoodana dhuunta u galay isla markaasna aan waxba u qabaneynin.**[AFLAGAADO WAA KA MAMNUUC]**.
wadani maxaa ka ogtahay waxaa tahay cuuc wax matare
May 7, 2011 at 09:25
Cali yare waan la socdaa in reer Linköping ay ka soo qeyb galeen korna waan ku qoray in magaalooyin kale laga yimid. Dhaliisheyda kuma aadana mudaharaadka sida uu u dhacay balse waa qabanqaabadii oo ahayd mid deg deg ah oo aan waqti ku fiican loo helin.
Mida kale dhaliisheyda waxay ku socotaa reer Stockholm oo Somaliska.com keliya ay akhristaan kumanaan balse inta badan aysan ka soo qeyb galin dibad baxa. 200 QOF waa tiro aad u yar marka laga hadlayo Soomaalida magaaladaas ku nool.
Wadani-iyo-koronto waad xanaaqsantahay, fadlan fikir wax ku ool ah soo bandhig ama iska aamus. Aflagaado iyo cey waa ka mamnuuc Somaliska. Mahadsanid
May 7, 2011 at 09:40
Sxb wad salamantahay jimcale, waxan ku weydinaya hada go’an rasmi ah oo ka so baxay barlamanka majira mise wali barlamanka wuu fadhiyaa. Jawab
May 7, 2011 at 10:09
Jimcaale waa sax weeye sxb reer Stockhol dhaliisha ugu wayn ayay leeyihiin, Markay yimaaddeena mudaharaadka kama aysan qayb galine gudaha baarlamaanka ayay horay ka galeen taana mid aan layaabay ayay ahayd.
Anigu GAVLE ayaan ka socday, Lakin waxaa igu maqaala in reer yataboori ay ahaayeen kooxdii ugu badnayd uguna hortimi mudaharaadka, ………..waan ugu hambalyaynayaa reer yataboori iyo dalladda sinnaannatverk oo iskusoo abaabushay hawsha.
MAMA KHADRA ALSAOW AYAAN MAHAD KALE U CELINAYNAA HADDAANU NAHAY REER GAVLE.
May 7, 2011 at 10:53
Waan ku salaamay walaal jimcaale,salaan ka dib horeyna waxaad u soo qortay Jimcaale in dadka ka soo qayb galey mudaaharaadka ay ahayeen 1500 oo qof hadana waxaa ka soo qayb galey ayaad dood ka samaysay 200 oo qof marka soomaaliduba waa isku dhex yaacsan tahay sow lama oran karo.Fikirka ah in la helo dad hogaan wanaagsan in la helo haa kaas waa kugu raacsanahay.
May 7, 2011 at 12:03
Haa waa sax sxb sidaas ayaan qornay markii hore waayo waa sidii naloo soo tabiyay balse sida cadaatay mudaharaadka ka dib 200 qof oo keliya ayaa ka soo qeyb gashay.
Macnaheeda ma ahan in uusan qabsoomin dibad baxa, waa uu qabsoomay oo guul ayuu ku dhamaaday balse waxaan aaminsanahay in sidaas si ka wacan la sameyn kari lahaa.
Isku xirnaan la’aanta ayaa markii horeba keentay in aan si hufan loo abaabulin bulsha weynta.
May 7, 2011 at 12:09
Waxaa iga su aal ah dadka ka soo qayb galay ma waxay ahaayeen 200 00 kali ah, somaliska.com markii aan toos u dhagaysanaynay dad weynaha markuu la su aalayey qiyaasta dadka ka soo qayb galay waxay sheegayeen tiro intaas ka badan ilaa 1500 bay ku dhaweeyeen, marka see wax u jiraan
May 7, 2011 at 12:58
waan idiin salaamay dhaman asxaabta waxaan ku weydiinaa jimcale maxaa kenay in lagu doodo tirada ka soo qeyb gashay mudaharaadka? hadii mar uu ahaa ujeedada in la dhigi mudaharaad wuuna qabsomay oona laga soo gudbay in ey dooda noqoto ma aha rer xafadaas ayaa imaatay ama imaanin fadlan waxaa ila haboon in laga hadlo waxa u baahan haladka iyo sidii looga sii gudbi lahaa asc
asc kuligina mihimada waxaa waye in dad yimadeyn waxaa ka tarna leheyd iyado imaanlahayey 10 qof 200 isku mid ma,ahaan hadu alle yiraahdo uu yimado mudaharad kale waxaan fikrad ahaan ku dari lahay in laga wada dhigo gobalada dhaan iyado gobalkaasta warqado la geyo masajiidka lona shego imaanka sido jimco oo kale dadka ugu shegi lahaay oo xata umada logu shegi lahaay iney cawiyaan walaalohoda muslimka oo dhibateysan ile somali wacdi la aan laguma jilci kare intaas ayeey tala iga tahay
May 7, 2011 at 14:41
ASC Walaalayaal aniga waan joogey mudaharaadka dadka tirada soo sheegey ayaa ila qaldan sababtoo ah dadka gobolada ka yimid ayaaba 400 ka yareyn mida kale dallada rikska waxba yaan kla dhaliilin wey dadaaleen sababtoo ah warqada codsiga ayadoon la hubin inuu baarlamaanku fariisan doono iyo in kale lama dooni karo waad ogtihiin in 30kii marso anagoo heysano ogolaansho uu fadhigii baarlamaanka dib u dhacey marka in ey dib isku dhigaan dalada oo ay asbuuc markeey ka dhimantahay codsadaan waan ku raacsanahay sababtoo ah labo ogolaansho oo ay horey u soo qaadeen ayaan qabsoomin mid waa kii qaraxa stockholm uu dhacey oo la baaqdey midan waa kii 30ka marso oo fadhiga baarlamanku uu baaqdey marka dallada la aanteed banaanbaxaan ma qabsoomeen walaalayaal ee waxba ha eedinina inaan u mahadcelinaan leenahay waa fikirkeyga
Waan idinsalaamey marka hore Jimcaale adigoo mahadsan waxay ila tahay SRFS inaan waxba dhaliisha la saarin waxaan ognahay iney da,daaleen warqada ogolaansha ayagaa noo soo qaadey guud ahaan banaanbaxana qabanqaabiyey gobolada ururada ka soo abaabuleyna ayageey ka mid yihiin oo dalladeey hoos tagaan mida kale marwalba wexey sameeyaan dadaalo ay si toosa ula xiriiraan dowladda marka aniga waxaan qabaa inaan eed la saarin soomaali cidna ma soo jafi karto kuwii ilmaha ka maqnaa xataa ma soo wada banaanbixin wexey aheyd maalin shaqo wexeyna dheheen kuwaan aniga u tagey oo iri kaaleya banaanbaxa noo raaca anaga iskolka uma goynkarno oo lacag baa nalaga goosanayaa marka kuwii laga maqnaaba hadeey soo banaanbixi waayeen ma kuwa ilmahooda u joogaan ayaa kuu soo banaanbixi inta soo banaan baxdey waa intii yareyd ee soomaalinimadu ku dambeysey dalladuna waxba ma dhibin ee yaan waxba dadka la eedeyn
May 7, 2011 at 16:57
Waad ku mahadsantihiin fikradaha qiimaha leh ee aad soo jeediseen, dhaliisheyda ma ahan mid wax lagu duminayo balse waa talo ku socota dadaalada mustaqbalka. Ma xaqirayo hawlaha SRFS balse waxaan aaminsanahay in intaas ka badan ay sameyn kareen. Sida aan horey u qoray tirada qiimo dadka ka soo qeyb galay ma ahan muhiimada oo mudaharaadka guul ayuu ku dhamaaday balse mustaqbalka waa in aan sameynaa isku xir wanaagsan iyo in aan qorsheynta bilowno waqti hore.
May 7, 2011 at 17:35
a,s,c,dhamaan bahda somaliska iyo dhamaan walaa aniga wexey ila tahay in mudaharadki kadhacay stokhlam uu udhacay si habsamileh balse suaashu eytahay muxuu sookordhayiy/
wuxuu sookordhiyay in marlabaad hadey somali mudaharad qabsanayan uukasiifiicnado sidihore sababtooah somali wexey kumahmahdaa qalad la aantii sax mayimado wayo hadaan wax laqaldin waxlama saxo aniga wexey ila tahay in guul lagaray w,b,t
aad baan u amaanayaa Somaliska riks, sababtoo ah, ama ha layaraado ama ha labato, waxay muujiyeen dadaal wayn. waxa aad ku qoraysid meesha waa waxa wadankeenii dumiyey. Mudaharaadka maalintii dhawyd waa ka badnaa 400 oo qof, wax aan amaan ahayn nagama mudna walaalaheen ururka midnimadda, ilaa maalintii la diiday waxay u taagnaayeen howsha, jazaakumulaah.
May 8, 2011 at 00:44
jimcaale sxb wa sidaa horay usoo qortay 2013 wax ka sokeeyo o furmaayo malaha arintane wa bajad dowlada sweden udagsan marka wax inta ka ween o la samen laha malaha
dj kacsan says:
May 8, 2011 at 04:55
jimcaale su al an ku weydiinayaa makula tahay somalida in wax loga qabto dhibatada ey sheganayaan mise xalku waa 50% sxbow jimcale somali hadii ey lahan lahayeen niyad ey isku jecladaan dalkenii ayaa iska jogi laheeen 200 =oo qofod hadii ay ka soo qebgaleen waa wax dhibleh lakiin waxkasta sidii uu ale ugu talagalay ayee ku dhamaan saalamucaleykum,
wiil la helay says:
Waxaan aad uga xumahay in qofkii muwaadin ah oo umaada danteeda raadiya aan aflagaado ugu badalno. waxaan ku soo barbaarnay magaalooyin ay ka taliyaan hogaamiye kooxeedyo iyo mooryaan ka taliyaan.
Waxaan ahay aabe ay ka maqanyihiin 5 caruur ah iyo hooyadood oo aan jeclahay, waxaan ka mid ahaa dadkii faafinayey mudaharaadka, waxaan u sheegay hooyo ay ilmo ka maqanyihiin oo iskuulka ila dhigata waxaan u sheegay isku soo baxa waxay iigu jawaabtay, ilaahay ha inoo sahlo dariiq am istaagikaree, ka warama arintaas. mudaharaadkii waxaan ahaa dadkii tirinayey walaahi kor wuxuu u dhaafay 400 oo qof markii aan anigu guddaha u galay. Waxaan aad uga xumahay aflagaada lagu hayo dad dakooda u taagan iyagoo ilmahoodii ay joogaan Sweden. Waxaan Sweden la nimid lugooyadii aan ku burburinay wadankeenii, waxkasta kuma qanacno, ha noolaado ururka midnimadu, Ajarbadana Alle ha siiyo, hagoogxumo yeelkiise
July 15, 2011 at 12:22
walahi been maha oo dadk aadbay u yaraayen an fidiyowga ka arkay, balse su aasha taal ayaa ah, anaga stockholm waan daganahay wax war bixinaana maanan ogeen cidna nooma sheegin waayo tv lagama hadlin oo lama oran maalintaas ayaa la banan bixin ee ha la isku imaado ha la isisoo diyaariyo, war bixinba manan haysan, somaliska.com waxaa igu horeesay maalinti uu banan baxu dhacay, qaamuska ayaan rabay inaan galo somaliska markaa qoray somaliska.com baa iso baxay waan iska aqristay webkan somaliga saasbana ku arkay webka iyo bananbixi dhacay, balse waxay aheed dadkii qaban qaabinayay inay dadka warbixin siiyan oo ogaysiis bixiyaan
waad mahadsantihin walaalyal